Samsung Galaxy Fold: famaritana, vidiny ary famoahana | Androidsis
Tonga ny andro. Taorian'ny tsaho sy volana marobe, Samsung dia nanolotra ny Galaxy Fold, ny finday avo lenta findainy voalohany, amin'ny fomba ofisialy. Novambra lasa teo tonga ny fampisehoana voalohany ny fitaovana, izay ahitanao vetivety ny sasany amin'ny endrika. Avy eo tamin'ny volana Janoary dia nanana angona vaovao momba ilay fitaovana izahay amin'ny CES 2019. Ary farany androany dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy.
Nanjary lohateny lehibe io finday io nandritra izay volana maro izay. Na omaly aza dia nahazo vaovao vaovao momba izany isika, araka ny anaranao. Saingy ofisialy ihany ny Galaxy Fold an'i Samsung. Smartphone nantsoina hamolavola ny tsena miaraka amin'ny endriny sy ny tsipiriany. Inona no azontsika antenaina amin'izany?
Samsung dia nanolotra avereno ny toerany ho iray amin'ireo orinasa manavao indrindra eny an-tsena. Noho izany, ny marika dia te hankalaza ny fahafolo taonan'ny Galaxy voalohany miaraka amin'ity fitaovana ity. Raha natombok'i Apple ny iPhone X tamin'ny androny, avelan'ny Koreana antsika miaraka amin'ity Galaxy Fold ity. Fitaovana iray izay tadiavin'izy ireo handresy ny tsena.
1 Famaritana Samsung Galaxy Fold
2 Samsung Galaxy Fold: smartphone finday avo lenta indrindra
Famaritana Samsung Galaxy Fold
Ity fitaovana ity dia fitambaran'ny endrika sy ny masontsivana. Tsy hoe mifototra amin'ny maodely mivalona miaraka amina endrika vaovao ao an-tsena ihany, fa mahita ihany koa famaritana amin'ny haavo an'ny fitaovana. Ireto misy andinindininy feno momba ny Samsung Galaxy Fold:
Famaritana ara-teknika Samsung Galaxy Fold
modely Galaxy Fold
Operating System Android 9 Pie miaraka amin'ny UI iray
efijery HD 4.6-inch HD + Super AMOLED (21: 9) fampirantiana anatiny ary QXGA + Dynamic AMOLED (7.3: 4.2) Infinity Flex fampisehoana 3-inch
processeur Exynos 9820 / Snapdragon 855
Tahiry anatiny 512 GB UFS 3.0
Fakan-tsary aoriana 16 MP f / 2.2 zoro ultra-wide 12 MP Dual Pixel ny zoro malalaka misy aperture miova f / 1.5-f / 2.4 sy stabilizer sary optika + 12 MP telephoto lens miaraka amin'ny zoom fanamafisana roa sy aperture f / 2.2
Fakan-tsary aloha 10 MP f / 2.2. + 8 megapixel f / 1.9 halalin'ny sensor ary 10 MP f / 2.2 eo amin'ny fonony.
Fitaovana hafa Mpamaky ny dian-tànam-baravarankely NFC
lanja Gramin'ny 200
vidiny $ 1980
Fanamby ho an'i Samsung ity maodely ity. Nilaza ny orinasa fa novolavolaina ny fitaovana sy ny fizotran'ny fanamboarana vaovao ahafahan'ity maodely ity mahatratra ny tsena. Ohatra, ny fomba miondrika dia zava-dehibe. Satria mivalona anaty ity modely ity. Ka rehefa miondrika dia mifanakaiky kokoa ny sisin'ny efijery.
Rehefa aforitra, mahita efijery lehibe 7,3-inch isika amin'ny fitaovana. Raha ny orinasa kosa dia nampiditra efijery 4,6-inch faharoa. Izay hamela ireo fampiasana finday marobe miankina amin'ny toe-javatra. Tonga miaraka amina vahaolana lehibe ireo pikantsary roa ireo. Indrindra ilay lehibe, natao handany atiny amin'ny fotoana rehetra.
Samsung Galaxy Fold: smartphone finday avo lenta indrindra
Ny hevitra an'ity Galaxy Fold ity dia ny fananana fitaovana iray mifanaraka amin'ny toe-javatra tsirairay. Rehefa aforitra dia azo tazomina eo am-pelatanana. Raha misokatra izy io dia afaka mijery horonan-tsary amin'ny fomba tsara indrindra. Samsung dia mamaritra azy a smartphone, tablette ary fakan-tsary amin'ny fitaovana iray. Famaritana tsara momba ity fitaovana ity.
Ilaina betsaka amin'ity fitaovana ity ny multitasking. Noho izany, Samsung dia hamela anao hanana fampiharana telo misokatra amin'ny fotoana iray rehefa ampiasaina amin'ny fomba takelaka. Afaka mijery horonan-tsary sy manana fampiharana amin'ny fitaovana miaraka amin'izay ianao. Io dia hahafahanao manokatra ireo fampiharana izay manandanja indrindra amin'ny fotoana rehetra amin'ny fomba tsotra. Samsung dia niara-niasa tamin'ny orinasa toa an'i Google sy Microsoft amin'ity dingana ity, mba hanatanterahana azy. Nozaraina nanerana ny efijery ireo rindranasa, mba hahafahan'izy rehetra misokatra, fa mampiasa azy ireo amin'ny fotoana iray ihany. Ho fanampin'izay, azo atao ny manova ny haben'ireo efijery ireo amin'ny fomba tsotra.
Fakan-tsary enina no hitantsika ao amin'ilay fitaovana. Fakan-tsary telo ao aoriana, roa ao anatiny ary iray eo aloha. Ka manana fakan-tsary isaky ny zoro miaraka amin'ity farany-marika avy amin'ny marika Koreana ity ianao. Azontsika atao tsara ny mahita ny fomba nahazoan'ny sary sary an-tsaina an'io sokajy orinasa io. Fifangaroana matanjaka, izay ahafahantsika mahazo tombony amin'ny avo indrindra amin'ny karazana toe-javatra rehetra.
Ny bateria dia lafiny iray izay nampisy fisalasalana. Ahoana no ahafahanao manana batterie amin'ny finday avo lenta? Samsung dia mamaha azy mora foana amin'ity Galaxy Fold ity. Manana filokana amin'ny batery roa izy ireo. Ka manana fahaleovan-tena ampy amin'ny telefaona amin'ny fotoana rehetra isika, ankoatra ny fanavaozana lehibe ho an'ny Samsung. Amin'ny alàlan'ny fananana bateria roa izay miasa amin'ny finday iray ihany. Amin'ity tranga ity dia manana fahaizana 4.380 mAh isika. Tsy misy na inona na inona voalaza momba ny fisian'ny famahanana haingana amin'ny fitaovana.
Ankoatry ny fahalalana ny zava-drehetra momba ity finday avo lenta ity, Samsung dia mamela antsika ihany koa fampahalalana momba ny daty fandefasana ny tsena, ankoatry ny vidiny. Betsaka ny tsaho momba ny vidin'ity Galaxy Fold ity. Fa farany efa manana ny angon-drakitra rehetra momba izany izahay. Na dia mialoha aza dia efa fantatray fa tsy ho mora vidy ity maodely ity raha ny vidiny ihany. Mihoatra ny vidin'ny eritreritsika ve ny telefaona?
Ho fanampin'ny vidiny, antsipiriany iray hafa mahaliana antsika ny daty fanombohan'ny fitaovana. Lafiny iray hafa izay nisy tsaho maro tao anatin'izay volana izay. Soa ihany fa efa ananantsika ny valin'ireo tsaho ireo. Ny 26 aprily izao ny fanombohana ny tsena. Noho izany dia mila miandry roa volana isika mandra-pahazoany vidiana ao amin'ny magazay.
Manomboka amin'ny loko efatra ny fitambarany: Manga, volamena, volafotsy ary mainty. Ankoatr'izay, arakaraka ny loko dia azo atao ny manamboatra ny faritra niondrika ilay fitaovana. Ka ny mpampiasa tsirairay dia ho afaka hamaritra ny fisehon'ny Galaxy Fold. Raha ny vidiny kosa dia $ 1.980 no vidiny hatramin'ny fivarotana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Galaxy Fold: ofisialy izao ny finday avo lenta an'ny Samsung
World of Legends dia MMORPG vaovao hotandremana